DAAWO: Ilaalada Ruclaysa ee ugu yaabka badan Dunida. – Xeernews24
DAAWO: Ilaalada Ruclaysa ee ugu yaabka badan Dunida.
12. Juni 2018 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Marka aad ku sugantahay Kuuriyada Waqooyi , ilaaladda Mr Kim ayaa isticmaala saddex saf . Balse taasi ayaa la sii adkeeyay xilliga uu ku sugnan doono Singapore ,iyadoo ay dadka dhammaan indhaha ku hayan nimankan dharka madow xidhan.
Waa inay muujiyaan inay leeyihiin xirfadaha sida xabadda loo rido iyo kartaayda, iyaga oo dadka iskaga dhicin kara gacmahooda, islamarkaasna loo tabobaray in ay u adkaystaan dhibaatada jir ahaan usoo gaadhi karta.
Waxay taasi astaan u tahay maamulkan, qaar ka mid ah shacabka Kuuriyada Waqooyi ayaa loo ogolaada inay qori ku qaadan agagaarka hogaamiyaha dalka. Ilaalada Kim Jong-un ayaa ka yar kuwii ilaalin jiray aabihiis tiro ahaan .
Ilaalada ayaa ku labista dharka galbeedka ,sida lagu arki doono marka ay yimaadan Singapore, hase yeeshe habka kaliye ee ay wax isku gaadhsiiyaan ayaa ah raadiyaha ,waxay isticmaalan dhar gooni ah oo lagu aqoonsado iyo haddalo maldahan .
Cabitaanka iyo Cuntada
Baadhitaan dhawaanahan laga sameeyey booqashada Mr Kim ee Singapore ayaa lagu ogaaday inay saddex diyaaradood uu ku yimaaday magaalada Pyongyang.
Marka laga hadlaya ammaanka Mr Kim , waxaa jira labo waax oo arrintan oo kaliye ku howlan. Marka lasoo xulayo illaaladan waxaa xitaa la baadhaa tariikhda qoyskooda illaa awoowgood, waxayna u badanyihii dad xidhiidh la leh qoyska reer Kim iyo taliyeyaasha ciidanka.
Hoos ka daawada
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/06/Ilaalada.jpg 393 700 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-06-12 11:06:282018-06-12 11:06:28DAAWO: Ilaalada Ruclaysa ee ugu yaabka badan Dunida.
Akhriso: Qodobada heshiis ay kala saxiixdeen Madaxweyne Trump & dhigiisa... Bayaan ka soo baxay golaha dhexe ee barbaarta sitti